सल्यानमा एक महिलालाई आत्महत्या गर्न बाध्यपार्ने ४ जना पक्राउ « Farakkon
सल्यानमा एक महिलालाई आत्महत्या गर्न बाध्यपार्ने ४ जना पक्राउ
दाङ, चैत ७ । सल्यानमा एक महिलालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्ने सबै पुरुष हुन । चैत ३ गते दिउँसो शारदा नगरपालिका वडा नं. १५ हरले निवासी २१ बर्षीया मुना नाथ आफ्नै घर भित्र झुण्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन ।
घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा मुनालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्ने खुल्न आएपछि चारजनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरिक्षक लक्ष्मण ओलीले जानकारी दिएका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा त्रिबेणी गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी २० बर्षीय विजय भण्डारी, २३ बर्षीय लालबहादुर राजगुरु, २३ बर्षीय अर्जुन रावत र मृतक मायाका पति २३ बर्षीय सुनिल नाथलाई रहेका छन् । भण्डारी र राजगुरुले मृतक मुनाको त्रिबेणी ६ निवासी २३ बर्षीय अर्जुन रावतसंग अनैतिक सम्वन्ध छ भन्ने आरोप लगाउँदै त्यो बदनाम गरेका थिए ।
उनीहरुले पोखरामा काम गर्ने मुनाका पति सुनिललाई समेत त्यो कुरा भनेपछि सुनिल चैत २ गते मध्यराति १२ बजेतिर सल्यानस्थित आफ्नो घर आएका थिए । आवेगमा आएर मध्यरातमै सुनिलले पन्ति मुनाले गाउँमा गर्दै आएको किराना पसलमा आगो लगाइदिए ।
सोही रात नै उनले पत्नि मायामाथि शारिरीक र मानसिक यातना समेत दिएको प्रहरीले बताएको छ । त्यसपछि मुनाका पति सुनिल र मुनालाई पर पुरुष संग अनैतिक सम्वन्धको आरोप लगाउने भण्डारी अनि राजगुरु मिलेर गाउँमा उनको बेइजत गर्दै हिडे ।
उनीहरुको हर्कतले मुनाको इज्जत र प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुग्यो । त्यो सहन गर्न नसकेर मुनाले सोही दिन दिउँसो घर भित्रै झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
उक्त बेहोरासहितको मृतक मुनाका बुवाको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले रावतसहित चार जनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता समेत रहेका ओलीले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका चारै जना विरुद्ध आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । सल्यान जिल्ला अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरेको प्रहरीले बताएको छ ।